Saciid Deni “Waxaa hubaa Wasiirka Waxbarashada in uusan ka warqabin natiijada imtixaanka” | XOG-DOON NEWS - Breaking News From Somalia
Home Wararka Maanta Saciid Deni “Waxaa hubaa Wasiirka Waxbarashada in uusan ka warqabin natiijada imtixaanka”
Saciid Deni “Waxaa hubaa Wasiirka Waxbarashada in uusan ka warqabin natiijada imtixaanka”
Madaxweynaha Puntland Saciid C/llaahi Deni ayaa ka hadlay natiijadii Imtixaanka Dugsiga Sare ee ka soo baxday Wasaaradda Waxbarashada Xukuumadda Soomaaliya, isagoo tilmaamay inay soo baxday wixii ay Puntland ka digi jirtay.
Saciid Deni oo jeedinayay khudbada billaha Isniinta ugu horeysa la hadla shacabka Puntland ayaa sheegay in Imtixaanaadka ay dowladda Dhexe ka dhigtay mid ay iyada maamusho, sidaas darteed ay ka dhalatay cilado kala duwan.
Waxaa uu sheegay inuu maleynayo in nidaamka loo qaaday imtixaanaadkaas aanay sax aheyn.
Saciid Deni ayaa sheegay in Muqdisho ay tahay magaalada xaga tacliinta ugu tayada fiican, uguna badan jaamacadaha, isla markaana ardayda ugu badan ay helaan deeqaha waxbarasho ee dibadda, maadaama ay u dhow yihiin, isagoo xusay in tallaabadii u horreysay ay muujineyso ciladda ka soo baxday Imtixaanaadkii dowladda dhexe maamuleysay.
Waxaa uu sheegay inay jiraan iskuulo baahiyo gaar ah qabay, gaar ahaan xilligii uu dhacay Covid-19 oo ardayda qaar ee adduunka darajooyinkii imtixaanaadka loo qiimeeyay, iyadoo la eegayay duruufaha jiray..
“Wasiirka Waxbarashada mar uu Puntland eedeynayay wuxuu yiri Imtixaan aan ka warqabin shahaado suur kama noqon karo, hadda waxaa hubaa wax badan inuu ka warqabin natiijada imtixaanada gobolada ka soo baxay oo natiijadeeda aanay sax aheyn”ayuu yiri Madaxweyne Deni.
Mr Deni ayaa tilmaamay in dowladda dhexe aanay maamuli karin inay Imtixaanaadka Gobolada dalka oo dhan la socoto, sidaas darteed Maamulada ay leeyihiin arrintaas.
Madaxweynaha Puntland ayaa soo dhoweeyay tallaabadii Gobolka Banaadir loogu wareejiyay maamulka waxbarashada, sidaas la mid ahna loogu baahan yahay in dowlad goboleedyada ay iyaga maamulaan waxbarashada, ayna kormeeraan sida u yiri.
Walaac badan ayaa laga muujiyay natiijadii Imtixaanka Dugsiga Sare oo ka soo baxday Wasaaradda Waxbarashada Xukuumadda Soomaaliya, waxaana dad badan ay ku tilmaameen natiijadaas mid aan sax aheyn, iyadoo Ardayda dhacday ee sideeda kun ahaayeen ardayda Gobolka Banaadir.
Previous articleMadaxweynayaasha Galmudug iyo Hirshabelle oo ku wajahan Baydhabo
Next articleMadaxweyne Farmaajo oo kulan la leh Wafdi ka socda Mareykanka